Maxaa ka jiro in Virus-ka Koron uu Soomaalida ku nool Shiinaha sameeyey? | Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka jiro in Virus-ka Koron uu Soomaalida ku nool Shiinaha sameeyey?
Maxaa ka jiro in Virus-ka Koron uu Soomaalida ku nool Shiinaha sameeyey?
Wuhan ( Caasimadda Online) – Safiirka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane oo ka warbixinayay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Shiinaha si gaarana gobolka Wuhan ee uu ka dilaacay caabuqa Koronaha, dad badanna dalka Shiinaha ugu dhinteen qaar kalene la il daran yihiin.
Safiir Cawaale Kullane ayaa sheegay in gobolka Wuhan ay ku nool yihiin ku dhawaad 40 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo u badan arday waxkabarata shan Jaamacadood oo gobolkaas ku yaala, kuwaas oo kala ah
1: Wuhan University,
2: Huazhong University science and technology,
3: Wuhan University of sciences and Engineering,
4: China University of Geosciences 5: Central China Normal University.
Danjire Cawaale Cali Kullane ayaa intaa ku daray in dhamaan muwaadiniintaas ilaa iyo hada ay caafimaad qabaan ayna tilmaamo caafimaad ka helaan hay’adaha caafimaadka ee virus-kan Korona la tacaalaya, sidoo kalena xariir lasoo sameeyaan safaaradooda oo xili walba diyaar ula ah in ay caawiso.
Safiir Cawaale ayaa ugu baaqay muwaadiniintaas in ay qaataan talooyinka caafimaad ay bixinayaan hay’adaha si cudurkaas usii faafin oo loo xakameeyo.